Shiinaha Deep Groove Ball saarista warshad iyo saarayaasha | Shallow Yong
Dhalista kubbadda jeexdin ee gunta dheer waa nooca ugu caansan ee dhalista rogista. Giraanta kubbadda jeexdin ee aasaasiga ah waxay ka kooban tahay giraan banaanka ah, giraan gudaha ah, xirmooyin kubbado bir ah iyo qaab jir lagu xajinayo. Qaab dhismeedkeedu waa mid fudud, fududahay in la isticmaalo, waa soosaarka ugu caansan, nooca ugu badan ee la isticmaalo ee dhalista. Wareegyada kubbadda hoose ee jeexdin waxaa loo isticmaali karaa qalabka saxda ah, sanaadiiqda, qalabka, matoorada, qalabka guryaha, matoorada gubashada gudaha, gawaarida gaadiidka, mashiinada beeraha, mashiinada dhismaha, mashiinada injineernimada, yo yo, iwm.
Waxaa jira laba nooc oo goos goos qoto dheer oo jeexdin ah: hal saf iyo laba saf. Qaab dhismeedka kubbada jeexdin qoto dheer ayaa sidoo kale loo qaybiyaa shaabad iyo qaab furan. Nooca furan wuxuu ka dhigan yahay in santuuqa uusan laheyn qaab dhismeedka shaabad, iyo kubad jeex jeexan oo qoto dheer ayaa loo qeybiyaa shaabad boodh iyo shaabad cadeyn saliid ah. Maaddada daboolka shaabaddu waa shaabad saxan bir ah, taas oo ka hortagi karta oo keliya in siigadu soo gasho waddada dhalista. Nooca cadeynta saliida waa shaabad taabashada saliida, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta dufanka ku jira dhalmada inuu qarqo.
Qaab dhismeedka iyo Astaamaha
Xaraashka kubbadda jeexdin ee qoto dheer waxaa iska leh dhalmada aan kala sooc lahayn, qaabdhismeedkeedu waa sahlan yahay, waana la adeegsadaa. Nooca aasaasiga ah ka sokow, dhalista kubbadda jeexdin ee qoto dheer waxay kaloo leedahay qaabab kala duwan oo kala duwan, sida: kubbadda jeexjeexan ee qoto dheer oo sita daboolka boodhka, kubbadda qoto dheer ee godka leh ee giraanta wax lagu xidho ee caagga ah, kubbadda godka dheer ee guluubka leh ee la socota jeexjeexa, kubbadda buuxinta ee buuxa qaadista leh culeys weyn oo xamuul ah iyo farqiga culeyska kubbadda.
Kubbada jeexjeexan ee qoto dheer badanaa waxay qaadataa culeyska shucaaca, laakiin sidoo kale waxay qaadi kartaa culeyska shucaaca iyo culeyska foosha. Waxay ku habboon tahay hawlgalka xawaaraha sare. Markay kaliya xambaarto culeyska shucaaca, xagalka xiriirku waa eber. Markay giraanta kubbadda jeexjeexan qoto dheer leedahay nadiifin shucaac oo ballaadhan, waxay leedahay waxqabadka isku-xidhka xagalka xagasha waxayna qaadi kartaa culeys weyn oo axial ah. Isuduwaha isdhaafka ee iskuxidhka kubbada jeexdin ee qoto dheer waa mid aad uyar xawaaraha xadka waa mid sareeya, laakiin kuma haboona in la qaado culeys culus. Marka nadiifinta radialku sii weynaato, awoodda waxqabadka dhidibka ayaa la kordhiyaa, xagasha xiriirkuna waa eber ka hooseeya xoogga shucaaca saafi ah. Marka ay jiraan xoog axial ah, xagalka xiriirku wuu ka weyn yahay eber.
Kubbada jeexjeexan ee qoto dheer badanaa waxay qaadataa culeyska shucaaca, laakiin sidoo kale waxay qaadi kartaa culeyska shucaaca iyo culeyska foosha. Markay kaliya xambaarto culeyska shucaaca, xagalka xiriirku waa eber. Markay giraanta kubbadda jeexjeexan qoto dheer leedahay nadiifin shucaac oo ballaadhan, waxay leedahay waxqabadka isku-xidhka xagalka xagasha waxayna qaadi kartaa culeys weyn oo axial ah. Isuduwaha khilaaf ee dhalista kubbada jeexdin ee qoto dheer waa mid aad u yar xawaaraha xadka sidoo kale waa mid aad u sareeya.
Xiga: Hub qaadista
QYBZ Deep Groove Ball Sita I